fonosana iray fonosana ho an'ny mpanamboatra fantsom-pamokarana - China mpiorina iray fonosana ho an'ny fantsom-pamokarana & famokarana
Calcium Zinc PVC stabilizer hafanana ho an'ny fantsom-panafody manondraka fantsom-pitaterana & rafitra fantsom-panafody PVC
Ny fantsom-pivoahana avy any ivelany sy ny faritra atsindrona PVC dia mitaky vokatra manana fahombiazana ara-teknika tena tsara, ny fepetra ara-toekarena sy ekolojika henjana indrindra. Ny rafitra fantsom-panafody PVC dia misy habe, endrika ary loko isan-karazany, ary ny teknika fanampiny sy teknika famokarana dia afaka mahazo ny vokatra tsara indrindra. Azo ampiharina amin'ny isan-karazany ny rafitra fantsom-panafody PVC: ny fantson-drano, ny fantson'ny fantsona maloto dia afaka manamboatra fantsona avo lenta sy fittings avo lenta ary manome toetra manokana an'ireo vokatra vita toy ny fahamendrehana mekanika avo lenta sy ny fiainana lava. Ny fantsom-bokatra sy ny fantsom-bokatra PVC no fotodrafitrasa amin'ny tontolo maoderina. Ny fampiasan'izy ireo manerantany dia noho ny toetra mampiavaka azy ireo, ao anatin'izany ny tanjaka sy ny faharetany, ny hametrahana ny fikojakojana sy ny fikojakojana, ny fanoherana ny harafesina, ny famerenana amin'ny laoniny, ny permeabilité ambany be ary ny fanoherana simika avo lenta ary ny vidiny tena lafo.
PVC Stabilizers ho an'ny casing & plumbing conduit elektrika any anaty tany misy fantsona misy kofehy
Ny stabilisiteran'ny PVC dia namokatra fantsona misy kofehy vita amin'ny fantsom-bokatra be mpampiasa amin'ny fananganana sivily, rafitra indostrialy fananganana rano anaty trano, rafitry ny fantsakan-drano an-tanàn-dehibe, fiompiana an-dranomasina, faritra onenana, faritra misy ny rafitra famatsian-drano nalevina, toeram-pitsaboana rano, zaridaina, fanondrahana, injenieran'ny fandavahana ary sehatra hafa. Ny fampiasan'izy ireo manerantany dia noho ny toetra mampiavaka azy ireo, ao anatin'izany ny tanjaka sy ny faharetany, ny fanamorana ny fametrahana sy ny fikojakojana, ny fanoherana ny harafesina, ny fivezivezena ambany, ny toetra mekanika tsara, ny famerenana amin'ny laoniny, ny permeabilité ambany dia ambany, ary ny fanoherana simika avo lenta ary ny vidiny tena lafo.
Heat Stabilizer ho an'ny fantsom-pantsaka famatsian-drano PVC sy UPVC fantsom-pantsaka fantsona PVC
Calcium Zinc heat Stabilizer dia fananana tsy manam-paharoa amin'ny fantsona sy fitt PVC. Izy io dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny fampidirana additives manokana, mba hamoronana fitaovana matanjaka amin'ny alàlan'ny fantsona toy ny PVC novaina, ny tatatra multilayer ary ny fantson-drano, ary ny fanoherana ny toetr'andro, ambonin'ireo fantson-drano mikoriana. Ireo additives ireo, ary koa ny stabilizers amin'ny hafanana sy ny menaka fanosorana ny fantsona, dia ampidirina amin'ny akora PVC ao anaty mixer hafainganam-pandeha haingam-pandeha hamokatra fangaro maina novolavolaina manokana ho an'ny dingan'ny fitrandrahana fantsona. CaZn Stabilizers koa dia mamaha olana ambany, tsy fahombiazan'ny fanodinana ary fanatanterahana vidiny tsara.
PVC Stabilizer ho an'ny fantsom-pamokarana rano fantsom-panafody pipa fantsona fantsom-pivoarana PVC UPVC
Ny Calcium Zinc PVC Stabilizer anay dia manolotra fantsona extruded PVC sy faritra atsindrona mitaky vokatra misy fahombiazana ara-teknika tena tsara, fitakiana toekarena sy ekolojika henjana indrindra. Ny rafitra fantsom-panafody PVC dia misy habe, endrika ary loko isan-karazany, ary ny teknika fanampiny sy teknika famokarana dia afaka mahazo ny vokatra tsara indrindra. Azo ampiharina amin'ny isan-karazany amin'ireo rafitra fantsom-panafody PVC: ny fantson-drano, ny fantson-drano maloto, ny fantsona fanondrahana, ny fantsona ary ny fantson'ny fantsom-pifandraisana dia afaka manamboatra fantsona sy fittings avo lenta ary manome toetra manokana an'ireo vokatra vita. Ny stabilizer dia manana fitoniana hafanana tena tsara, tsiranoka tsara, takelaka ambany ary faran'izay tsara.
Stabilizer tsy misy poizina Pvc, Pvc Heat Stabilizer, Pvc One Pack Stabilizer, Pvc Additives, Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile, Pvc Stabilizer,